Júlia Lopes de Almeida, mpanoratra namiratra tamin’ny tanonjato faha-19, saingy tsy hita any amin’ny Akademia Breziliàna Momba ny Haisoratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2019 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Italiano, ਪੰਜਾਬੀ, Español, Português
Júlia Lopes de Almeida, ilay vehivavy voalohany mpanoratra tao Brezila, nandray anjara tamin'ny fanorenana ny ABL saingy tsy nahavita naka toerana iray tao satria vehivavy | Sary : Reprodução/Fundação Biblioteca Nacional
Tao anatin'i Brezila tamin'ny tapany faharoan'ny taonjato faha-19, niavaka i Júlia Lopes de Almeida [fr] : vehivavy iray manoratra ary tsy nivelona afa-tsy tamin'ny asa sorany. Renim-pianakaviana, nanambady an'ilay portiogey poety, Filinto de Almeida, izy no iray tamin'ireo vehivavy breziliàna voalohany nanoratra tantara foronina. Amin'ny maha-olona nahita fianarana azy niaro ny fanafoanana ny fanandevozana, nitàna ny toerana mpiaro ny vehivavy ary nahita fahombiazana maro teny anivon'ny daholobe, nanday anjara izy tamin'ny fananganana ny Akademia Breziliàna momba ny Haisoratra (ABL). Nahilika ny anarany taty aorian'izany rehetra izany, nony injay tonga tamin'ny resaka fidirana ho ao anatin'ilay ivontoerana, noho izy hoe vehivavy fotsiny.
Kisendrasendra no nahitàna io fahabangana goavana tao anatin'ny tantara 121 taona nisian'ny ABL io, nandritra ny fikarohana iray natao tamin'ny 2015. Tao anatin'ny fanomanany haka ny doctorat momba ny Fandalinana Breziliàna tao amin'ny Anjerimanontolon'i São Paulo (USP), Michele Fanini dia nahita, adino tany anaty rakitra iray, lahatsoratra 12 nosoniavin'i Júlia. Tantarainy fa, na dia misoratra eo amin'ny lisitra voalohany ahitana ny anaran'ireo mpanorina ny Akademia aza ny anaran'ilay vehivavy mpanoratra, dia nofafàna tsy ho ao anatin'ny tantara avy eo :
Júlia Lopes de Almeida no voalohany sady tena fanevan'ny fahabangana anaty andrim-panjakana vokatry ny sakana apetraky ny maha-lahy na vavy
Tao anaty fitadidiana iray natokana ho an'ny fandikàna ireo asa soratr'i Júlia ho amin'ny teny espaniola, Sabrina Duque, vehivavy ekoatoriàna mpanao gazety, mahamarika fa ny fiangalin'ilay mpanoratra dia nanafangaro « ireo teny avy amin'ny teny afrikàna, fomba fiteny frantsay, ireo fanaon'ny fiarahamonina carioca tamin'izany fotoana, ireo anarana toerana tondroina malaky, ireo teny avy aminà hira malaza » :
Júlia Valentina da Silveira Lopes de Almeida (1862-1934) dia vehivavy tsy fahita loatra andavanandro tamin'ny fotoan'androny. Lazaina hoe iray tamin'ireo vehivavy breziliàna mpanoratra vitsy an'isa tamin'ny taonjato faha-19 izay ny nalaza indrindra sy be mpamaky tamin'ny vanimpotoana niainany, rehefa jerena ireo mpanoratra rehetra tsy anavahana, tao Brezila sy Portiogaly.
Tantarain'i Sabrina fa tamin'ny fotoana nananganana ny ABL, efa nanana « asa soratra iray mendri-kaja » sahady i Júlia, noraketiny ireo kiana miabo ary azony nitokiana ireo tombony nomen'ny daholobe ho azy. Na izany aza, tsy nahazo afa-tsy fanohanana efatra monja ny firotsahany ho amin'ny Akademia.
Notoherin'ireo lehilahy mpahay momba ny Soratra io hevitra io, noho ny fotokevitra hoe ny fanekena an'i Júlia Lopes de Almeida dia midika fanokafana ny varavaran'ny Akademia ho an'ny vehivavy, izay noheverina ho toy ny « laharana faharoa amin'ny karazana» sy toy ny olona ambany mitaha amin'ny lehilahy, taminà vanimpotoana iray izay ny anjara asan'ny vehivavy dia voafetra tamin'ny fitsaratsaram-poana ny renim-pianakaviana ho mpankatò sy mpiasa mikarakara tokantrano.
Iza moa i Júlia Lopes de Almeida ?
Júlia Lopes de Almeida, tsy voafaritra ny daty | Sary : Arquivo Nacional/Domínio Público
Júlia dia teraka tao Rio de Janeiro tamin'ny 1862. Tamin'ny taona izay nanapahan'i Brezila ny fifandraisany diplaomatika tain'ny Fanjakana Mitambatra noho ilay Raharaha Christie [fr]. Nihamafy io fifanenjanana io satria i Brezila nisisika ny hitazonana ny rafitra fanandevozana ny Afrikàna. Zanaka vehivavy portiogey mpifindra monina, Júlia, araka izay anoratan’i Luiz Ruffato azy, dia « nahazo fanabeazana lalina sy malalaka, mifanohitra amin'izay fenitra napetraka tamin'izany fotoana izany natao ho an'ny vehivavy ».
Noho ny fandrisihan'ny rainy, teo amin'ny faha-20 taonany teo izy no namoaka ireo lahatsorany voalohany tao anatin'ny gazetin'i Campinas, kaominina ao anatin'ny Fanjakan'i São Paulo. Rehefa nifindra ho any Lisbonne ny fianakaviany, toerana nifankahitany tamin'ilay ho vadiny, nanohy nanoratra izy ary namoaka tao anatin'ireo gazety sy alimanaka no sady namarana ny bokiny voalohany : angano voafantina Traços e iluminuras. Taona vitsivitsy taorian'izay, raha izy mbola nonina tany Rio de Janeiro, navadiny ho toerana fihaonana eo amin'ireo mpanakanto, nahita fianarana ary mpanao gazety ny tranony.
Ruffato koa manoratra ao anaty lahatsoratra iray hafa :
Raha nifantohan'i Júlia Lopes de Almeida (1862-1934) fotsiny ny hiaraka hiasa amin'ireo gazety sy gazetiboky, no sady niaro ny hasarobidin'ny fanabeazana ny ankizy ary fanomezana hasiny ny anjara toeran'ny vehivavy ao anaty fiarahamonina izy, mety efa nitàna toerana mendrikaja tao anatin'ireo feo breziliàna mpiaro ny vehivavy isan'ny manana ny lazany izy. Saingy nanao mihoatra lavitra noho izany i Júlia : nanoratra tantara foronina tsara rindra izy, izay amaritany amim-pahamendrehana sy tsy misy tomika ny anjara toeran'ireo vehivavy eo amin'ny sampanandàlan'ny fiarahamonina tamin'ny fiafaran'ny taonjato faha-19 sy fiandohan'ny taonjato faha-20, nefa tsy mandositra ihany koa nanoloana ireo fomohafohazana ireo fomba fiteny manahirana sy resabe tamin'izany vanimpotoana izany.
Maty tao Rio teo amin'ny faha-72 taonany, noho ny aretina malarià nahazo azy, i Júlia. Talohan'ny fitiliana anefa, nitety izao tontolo izao izy, nandalo tao Eoropa, ny atsimon'i Brezila, Buenos Aires ary Afrika.
Miverina ny tantara
Ny 30 Aogositra 2018, niverina indray ny tantaran'i Júlia – sy ny an'ireo vehivavy hafa mpanoratra marobe. Toy ny an'ilay hany vehivavy tokana nanangana ny ABL nosakanana hatrany am-boalohany tsy hahazo miditra ao, dia notsinontsinoavina ihany koa ny mety hitrangan'ny hoe hisy vehivavy afro-breziliàna hahazo sezan'ny mandrakizay ao. Na nisy aza ny fanentanana nalaza be tsy mbola nisy toa azy natao tao amin'ny Akademia, tsy nahazo vato afa-tsy tokana i Conceição Evaristo [fr]. Ilay mpanatontosa sarimihetsika Cacá Diegues no voafidy tamin'ny vato 22. Faharoa i Pedro Corrêa do Lago, nahazo 11.
Natsangana tamin'ny 20 Jolay 1897, taompolo valo no nilain'ny ABL mba hanomezana toerana ho an'ny vehivavy iray. Tamin'ny 1977, i Rachel de Queiroz [fr], bresiliàna vavy mpanoratra, no lasa vehivavy voalohany nahazo nhy sezan'ny mandrakizay. Tao anatin'ireo taompolo nanaraka an'izay, vehivavy fito no tafiditra tao amin'ny Akademia: Dinah Silveira de Queiroz (1980), Lygia Fagundes Telles (1985), Nélida Piñon (1989), Zélia Gattai (2001), Ana Maria Machado (2003), Cleonice Berardinelli (2009) ary Rosiska Darcy (2013). Avy eo, tsy nisy intsony na iray aza.
Ny asa soratra sasany avy amin'i Júlia dia azo raisina ao amin'ny Domínio Público sy ny tranonkala Literatura Digital an'ny Anjerimanontolo Federalin'i Santa Catarina (UFSC).